Real Madrid oo xiliciyaareedkan Diirada ku heysa Cesc Fabrecas – SBC
Real Madrid oo xiliciyaareedkan Diirada ku heysa Cesc Fabrecas
Kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa xiisaynaysah helitaanka kabtanka kooxda Gunners.
Madrid ayaa xagaaga qorshaynaysa in ay isha kow waad ee suuqa kala iibsiga ay kadhigato kubad samayaha Arsenal.
Madaxweynaha kooxda boqortooyada Real Florentni peres ayaa sheegay helitaanka laacibkan Arsenal ay duldhigaayaan qiima lacageed oo dhan 35millyan oo Euro, wuuxuuna intaasi kudaray madaxweynaha kooxda boqortooyada Real in ay kuladagaalamidoonaa kooxda Barcelona oo ah koox ay xifaaltan iyo cadowtinimo kadhaxayso waxase meesha taala in fabrecas uu yahay catalanin waana su,aasha u madaxweyni peres uu isweydiiyoo siduu kuhelilahaa cabtan Fabrecas?
Kooxda Real Madrid waxay suuqyada kala iibsiga kukhasaaraysay labadii xiliciyaareed ee lasoo dhaafay lacag dhan 400millyan oo Euro haba lagu soo iibsado intabadan xidigaha Kaka iyo Ronaldo,tasoo ay sanadka kaliya kuguulaysteen Copa Del Rey,halka ay Barca kugiilaysatay labada xiliciyaareed koobka hotyaal Spain ee la liga.
Kabtan Fabrecas ayaa asagu aamisan hadii uu isga tago garoonka Emarties in uu dib ugu laabandoono kooxdiisii uu kusoobarbaaray ee Barcelona oo ayadu kubaadigoobaysa 31millyan oo Euro.
Balse kooxda Real Madrid waxa ay qorshaynaysaa in ay gacanta kudhigto laacibkan waxaana qorsha Real uu yahay un ay iska garabciyaarsiiyaan xidigaha iskuwadanka ah Alonso iyo Fabrecas.
Macalinka kooxda Arsenal winger ayaan kuqanacsanayn joogitaanka iyo tagitaanka kabtan CESC wuxuuna dalbaday hadii uu kabtankoodu tagaayo 50 Euro in ay bixiso kooxda ayadu doonaysa un ay qaadato kubadsamay yahooda.
waxa ayna tani fursad siinaysa kooxaha raadinaaya lacibkaan kuguulaystaha koobka aduunka 2010 south Africa lagisoogabagabayay.
Kooxda Real oo kaliyama aha kooxaha kuwareeray helitaanka Fabrecas waxa tartanka kujira Chelsea,Mann city,Inter Milan,Barcelona
Feysal C/laahi Maxamed (Farateeb)